“UKristu Ongamandla KaThixo” | Sondela
“UKristu Ongamandla KaThixo”
1-3. (a) Ngawaphi amava oyikekayo ababa nawo abafundi kuLwandle lwaseGalili, yaye yintoni awayenzayo uYesu? (b) Kutheni uYesu ebizwa ngokufanelekileyo ngokuba ‘nguKristu ongamandla kaThixo’?
ABAFUNDI babesoyika. Bathi beseluhambeni kuLwandle lwaseGalili kwavuka isaqhwithi ngesiquphe. Ngokungathandabuzekiyo babekhe bazibona izaqhwithi kweli chibi ngaphambili—ngapha koko, abanye babo babengabalobi abanamava. * (Mateyu 4:18, 19) Kodwa esi ‘yayisisaqhwithi somoya omkhulu,’ esalutsho olo lwandle lwaba ndlongo-ndlongo ngephanyazo. La madoda azama ngamandla ukusilawula isikhephe, kodwa oyiswa seso saqhwithi. Amaza amakhulu “ayentlaleka esikhepheni,” saza saqalisa ukungenwa ngamanzi. Phezu kwawo nje onke loo manzithi-nzithi, uYesu wayelele yoyi emva esikhepheni, ediniwe emva kokuchitha usuku lonke efundisa izihlwele. Besoyika ukufa, aba bafundi bamvusa, bembongoza besithi: “Nkosi, sisindise, siza kutshabalala!”—Marko 4:35-38; Mateyu 8:23-25.
2 UYesu wayengoyiki. Ngentembelo epheleleyo, wawukhalimela umoya kunye nolwandle, esithi: “Yithi tu! Uzole!” Ngoko nangoko, wathobela umoya nolwandle—saphela isaqhwithi, namaza azola, kwabakho “ukuzola okukhulu.” Ngoku abafundi bangenwa luloyiko olungaqhelekanga. Babuzana besithi: “Ngubani ngokwenene lo?” Eneneni, luhlobo olunjani lomntu onokukhalimela umoya nolwandle ngokungathi ungxolisa umntwana ongevayo?—Marko 4:39-41; Mateyu 8:26, 27.
3 Kodwa uYesu wayengengomntu oqhelekileyo. Amandla kaYehova ayebonakaliswa kuye nangaye ngeendlela ezingaqhelekanga. Umpostile uPawulos ophefumlelweyo wabhekisela kuye ngokufanelekileyo ngokuthi ‘nguKristu ongamandla kaThixo.’ (1 Korinte 1:24) Amandla kaThixo abonakaliswa ngaziphi iindlela kuYesu? Yaye ukusebenzisa kukaYesu amandla kunokubuchaphazela njani ubomi bethu?
Amandla ONyana KaThixo Okuphela Kwamzeleyo
4, 5. (a) Ngawaphi amandla negunya uYehova awalinika uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo? (b) Lo Nyana waxhotyiselwa njani ukuphumeza injongo kaYise yokudala?
4 Khawucinge nje ngamandla uYesu awayenawo ngaphambi kokuphila kwakhe njengomntu. UYehova wabonakalisa ‘amandla akhe angunaphakade’ xa wadala uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, obizwa ngokuba nguYesu Kristu. (Roma 1:20; Kolose 1:15) Emva koko, uYehova wamnika amandla amakhulu lo Nyana wakhe, wamabela ukuba aphumeze injongo Yakhe yokudala. Ngokuphathelele uNyana, iBhayibhile ithi: “Zonke izinto zabakho ngaye, yaye ngaphandle kwakhe akubangakho nanye into.”—Yohane 1:3.
5 Sinokubuthelekelela nje kuphela ubukhulu beso sabelo. Khawuthelekelele amandla awayefuneka ukuze kudalwe izigidi zeengelosi ezinamandla, indalo iphela kunye namawaka ezigidi zeminyele yayo, kunye nomhlaba nezinto ezininzi eziphilayo kuwo. Ukuze aphumeze loo msebenzi, uNyana okuphela kozelweyo wasebenzisa awona mandla makhulu kwindalo iphela—umoya oyingcwele kaThixo. Lo Nyana wayoliswa kakhulu kukuba nguMsebénzi Onobuchule, owasetyenziswa nguYehova ekudaleni zonke izinto.—IMizekeliso 8:22-31.
6. Emva kokufa nokuvuka kwakhe emhlabeni, uYesu wanikwa waphi amandla negunya?
6 Ngaba lo Nyana okuphela kozelweyo wayenokufumana amandla negunya elikhulu ngakumbi? Emva kokufa nokuvuka kwakhe emhlabeni, uYesu wathi: “Linikwe mna lonke igunya ezulwini nasemhlabeni.” (Mateyu 28:18) Ewe, uYesu unikwe ubuchule negunya lokusebenzisa amandla kwindalo iphela. ‘NjengoKumkani wookumkani neNkosi yeenkosi,’ unikwe igunya ‘lokubatshitshisa bonke oorhulumente nawo onke amagunya’—abonakalayo nangabonakaliyo—achasene noYise. (ISityhilelo 19:16; 1 Korinte 15:24-26) UThixo “akashiyanga nto ingathotyelwanga” kuYesu—oko kukuthi, ngaphandle kukaYehova ngokwakhe.—Hebhere 2:8; 1 Korinte 15:27.
7. Kutheni sinokuqiniseka ukuba uYesu akanakuze awasebenzise kakubi amandla uYehova amnike wona?
7 Ngaba sifanele sikhathazeke kukuba uYesu usenokuwasebenzisa kakubi amandla akhe? Akunjalo konke konke! UYesu umthanda ngokwenene uYise yaye akasayi kuze enze nantoni na engamkholisiyo. (Yohane 8:29; 14:31) UYesu wazi kakuhle ukuba uYehova akaze awasebenzise kakubi amandla akhe amakhulu. UYesu uye wazibonela ukuba uYehova ukhangela amathuba ‘okubonisa amandla akhe kwabo bantliziyo ziphelele kuye.’ (2 Kronike 16:9) Ngokwenene, uYesu uluthanda uluntu ngendlela noYise aluthanda ngayo, ngoko sinokuqiniseka ukuba uYesu uya kusoloko ewasebenzisa ngendlela efanelekileyo amandla akhe. (Yohane 13:1) UYesu uzakhele ingxelo entle kule nkalo. Makhe sihlolisise amandla awayenawo ngoxa wayesemhlabeni nendlela awawasebenzisa ngayo.
8. Emva kokuthanjiswa kwakhe, yintoni uYesu awanikwa amandla okuba ayenze, yaye wawasebenzisa njani la mandla akhe?
8 Ngokucacileyo, uYesu akazange enze mimangaliso ngoxa wayeyinkwenkwe ekhulela eNazarete. Kodwa oko kwatshintsha emva kokubhaptizwa kwakhe ngowama-29 C.E., xa wayemalunga neminyaka engama-30 ubudala. (Luka 3:21-23) IBhayibhile ithi: ‘UThixo wamthambisa ngomoya oyingcwele namandla, yaye walityhutyha ilizwe esenza okulungileyo kwaye ephilisa bonke abo bacinezelwe nguMtyholi.’ (IZenzo 10:38) ‘Ukwenza okulungileyo’—ngaba oko akubonisi ukuba uYesu wawasebenzisa kakuhle amandla akhe? Emva kokuthanjiswa kwakhe, “waba ngumprofeti onamandla ngomsebenzi nelizwi.”—Luka 24:19.
9-11. (a) UYesu wayeshumayela phi kakhulu, yaye luluphi ucelomngeni awajamelana nalo? (b) Kwakutheni ukuze izihlwele zikhwankqiswe yindlela uYesu awayefundisa ngayo?
9 UYesu wayenamandla njani ngelizwi? Ngokufuthi wayefundisa esidlangalaleni—elunxwemeni nasezindulini nasezitratweni nakwiindawo zembutho. (Marko 6:53-56; Luka 5:1-3; 13:26) Abo babemphulaphule babenokusuka nje ngokulula bahambe ukuba amazwi akhe ayengahlab’ umxhelo. Kumaxesha angaphambi kokushicilelwa kweencwadi, abaphulaphuli abanomdla babefanele bawagcine ezingqondweni nasezintliziyweni zabo amazwi akhe. Ngoko imfundiso kaYesu yayifanele ihlab’ umxhelo, icace, yaye kube lula ukuyikhumbula. Kodwa oku akuzange kube ngumqobo kuYesu. Ngokomzekelo, khawucinge nje ngeNtshumayelo yakhe yaseNtabeni.
10 Ngenye intsasa yowama-31 C.E., isihlwele sahlanganisana endulini ngakuLwandle lwaseGalili. Bambi babevela kwilizwe lakwaYuda naseYerusalem, ndawo ezo ezikumgama weekhilomitha ezili-100 ukusa kwi-110. Abanye babevela kummandla ongasentla wonxweme lwaseTire naseSidon. Abantu abaninzi abagulayo basondela kuYesu ukuze bamchukumise, yaye wabaphilisa bonke. Xa kwakungasekho namnye umntu ogula kakhulu oseleyo phakathi kwabo, waqalisa ukufundisa. (Luka 6:17-19) Akugqiba ukuthetha emva kwethuba, babemangalisiwe koko bakuvayo. Ngoba?
11 Emva kweminyaka eliqela kamva, omnye owayivayo loo ntshumayelo wabhala wathi: “Zathi khamnqa izihlwele yindlela yakhe yokufundisa; kuba wayebafundisa njengomntu onegunya.” (Mateyu 7:28, 29) UYesu wathetha ngamandla achukumisayo. Wathethela uThixo waza wayisekela imfundiso yakhe ngegunya leLizwi likaThixo. (Yohane 7:16) Amazwi kaYesu ayecacile, izibongozo zakhe zazichukumisa, yaye iingxoxo zakhe zazingenakuphikiswa. Amazwi akhe ayebenza baqiqe abaphulaphuli bakhe yaye afikelela iintliziyo zabo. Wabafundisa indlela yokufumana uyolo, indlela yokuthandaza, indlela yokufuna uBukumkani bukaThixo, nendlela yokwakha ikamva elinqabisekileyo. (Mateyu 5:3–7:27) Amazwi akhe avuselela iintliziyo zabo balambele inyaniso nobulungisa. Abo banjalo babekulungele ‘ukuzincama’ baze bashiye yonke into ukuze bamlandele. (Mateyu 16:24; Luka 5:10, 11) Hayi indlela oko okuwangqina ngayo amandla amazwi kaYesu!
12, 13. UYesu ‘wayenamandla ngomsebenzi’ ngayiphi ingqiqo, ibe yayahlukahlukene njani imimangaliso yakhe?
12 Kwakhona uYesu ‘wayenamandla ngomsebenzi.’ (Luka 24:19) Iincwadi zeVangeli zichaza imimangaliso engaphezu kwama-30 awayenzayo—yonke eyenza ‘ngamandla kaYehova.’ * (Luka 5:17) Imimangaliso kaYesu yachaphazela ubomi bamawakawaka abantu. Imimangaliso nje emibini—ukondliwa kwamadoda angama-5 000 namadoda angama-4 000 kamva “ngaphandle kwabafazi nabantwana abaselula”—kwakuquka isihlwele esasinokuba ngabantu abangama-20 000!—Mateyu 14:13-21; 15:32-38.
“Bambona uYesu ehamba phezu kolwandle”
13 Imimangaliso kaYesu yayahlukahlukene. Wayenegunya phezu kweedemon, ezikhupha ngokulula nje. (Luka 9:37-43) Wayenamandla phezu kwendalo, ejika amanzi abe yiwayini. (Yohane 2:1-11) Abafundi bakhe bamangaliswa kukuhamba kwakhe phezu koLwandle lwaseGalili olwalubhudlwa ngumoya. (Yohane 6:18, 19) Wayenamandla okoyisa izifo, nawokuphilisa iziphene, imilwelwe, kunye nezigulo ezibulalayo. (Marko 3:1-5; Yohane 4:46-54) Wakwenza oko ngeendlela ezahlukahlukeneyo. Omnye umntu uYesu wamphilisa ekumgama okude kakhulu, kanti abanye wabachukumisa ngokoqobo. (Mateyu 8:2, 3, 5-13) Bambi baphiliswa ngoko nangoko, abanye ngokuthe ngcembe.—Marko 8:22-25; Luka 8:43, 44.
14. UYesu wabonakalisa ukuba wayenamandla okuphelisa ukufa phantsi kwaziphi iimeko?
14 Ngokubalaseleyo, uYesu wayenamandla okuphelisa ukufa. Kangangezihlandlo ezithathu, wavusa abafileyo, wabuyisela intombazana ene-12 leminyaka ubudala kubazali bayo, wabuyisela nomntwana okuphela kwakhe kunina ongumhlolokazi, waza wabuyisela umfana othandekayo koodade wabo. (Luka 7:11-15; 8:49-56; Yohane 11:38-44) Ayikho imeko eyangqineka imongamele. Intombazana ene-12 leminyaka ubudala wayivusa kanye nje emva kokufa kwayo. Unyana womhlolokazi wamvusa esiya kungcwatywa, ngokungathandabuzekiyo ngosuku awafa ngalo. Yena uLazaro wamvusa esengcwabeni emva kokuba eneentsuku ezine efile.
Ukusetyenziswa Kwamandla Ngokungazingci, Ngokuqonda Nangolwazelelelo
15, 16. Bubuphi ubungqina obubonisa ukuba uYesu wayewasebenzisa ngokungazingci amandla akhe?
15 Ngaba unokuyithelekelela indlela ebenokusetyenziswa kakubi ngayo la mandla kaYesu ukuba ayenikwe umlawuli ongafezekanga? Kodwa uYesu wayengenasono. (1 Petros 2:22) Akazange azivumele ukuba adyojwe kukuzingca, ngamabhongo, nakukubawa okuphembelela abantu abangafezekanga ukuba basebenzise amandla abo ukuvisa abanye ubuhlungu.
16 UYesu wawasebenzisa ngokungazingci amandla akhe, akazange awasebenzisele ukuzuza ingenelo yobuqu. Xa wayelambile, wala ukujika amatye abe zizonka. (Mateyu 4:1-4) Ukungabi nazinto kwakhe kwakububungqina bokuba akazange awasebenzisele ukuzuza izinto eziphathekayo amandla akhe. (Mateyu 8:20) Kukho ubungqina obungakumbi bokuba imisebenzi yakhe yamandla yayiqhutywa ziintshukumisa zokungazingci. Xa wayesenza imimangaliso, nguye owayelahlekelwa. Xa wayephilisa abagulayo, kwakuphuma amandla kuye. Kwakuvakala oku kuphuma kwamandla, kwanokuba wayephilise umntu nje omnye. (Marko 5:25-34) Sekunjalo, wavumela izihlwele zabantu zamchukumisa, zaza zaphiliswa. (Luka 6:19) Onjani wona umoya wokungazingci!
17. UYesu wabonisa njani ukuba wayewasebenzisa ngokuqonda amandla akhe?
17 UYesu wayewasebenzisa ngokuqonda amandla akhe. Akazange enze imisebenzi yamandla ngenjongo nje yokutsal’ amehlo okanye enze imimangaliso engenanjongo yokucel’ injezu. (Mateyu 4:5-7) Wayengakulungelanga ukwenza imiqondiso ukuze nje anelise iintshukumisa eziphosakeleyo zikaHerode. (Luka 23:8, 9) Kunokuba awabhengeze amandla akhe, ngokufuthi uYesu wabayalela abo wayebaphilisa ukuba bangaxeleli nabani na. (Marko 5:43; 7:36) Wayengafuni ukuba abantu benze izigqibo ngaye ngeengxelo ezibaxiweyo.—Mateyu 12:15-19.
18-20. (a) Yintoni eyayiphembelela indlela uYesu awawasebenzisa ngayo amandla akhe? (b) Uvakalelwa njani ngendlela uYesu awayiphilisa ngayo indoda ethile eyayisisithulu?
18 Lo mntu onamandla, uYesu, wayahluke kakhulu kubalawuli abaninzi abaye basebenzisa amandla bengazikhathalelanga iimfuno neengcinezelo zabanye. UYesu wayebakhathalele abantu. Wayethi akubabona abaxhwalekileyo achukumiseke ngokunzulu ngokokude abahlangule ekubandezelekeni kwabo. (Mateyu 14:14) Wayenolwazelelelo ngeemvakalelo nangeentswelo zabo, yaye olu lwazelelelo lothando lwaphembelela indlela awawasebenzisa ngayo amandla akhe. Umzekelo ochukumisayo ufumaneka kuMarko 7:31-37.
19 Ngesi sihlandlo, izihlwele ezikhulu zamfumana uYesu zaza zazisa kuye abaninzi abagulayo, yaye wabaphilisa bonke. (Mateyu 15:29, 30) Kodwa uYesu wakhetha indoda enye waza wanikela kuyo ingqalelo ekhethekileyo. Le ndoda yayisisithulu yaye isisimumu. UYesu usenokuba wakuphawula ukuphakuzela nokuba neentloni kwale ndoda. Ngolwazelelelo, uYesu wayithabathela ecaleni le ndoda—wayikhupha kweso sihlwele—wayisa kwindawo engasese. Wandula ke uYesu wasebenzisa imiqondiso ukubonisa le ndoda oko wayeza kukwenza. ‘Wafaka iminwe yakhe ezindlebeni zale ndoda waza, emva kokutshica, wachukumisa ulwimi lwayo.’ * (Marko 7:33) Emva koko, uYesu wakhangela phezulu ezulwini waza wathandaza enesingqala. Ngokwenza oku wayebonisa le ndoda ukuba, ‘Oku ndiza kukwenzela kona kungenxa yamandla avela kuThixo.’ Ekugqibeleni, uYesu wathi: “Vuleka.” (Marko 7:34) Kwangoko, le ndoda yakwazi ukuva nokuthetha ngokuqhelekileyo.
20 Hayi indlela ekuchukumisa ngayo ukucinga ukuba kwanaxa wayesebenzisa amandla awanikwe nguThixo okuphilisa abaxhwalekileyo, uYesu wabonisa ulwazelelelo ngeemvakalelo zabo! Ngaba akukhuthazi na ukwazi ukuba uYehova ubunikele uBukumkani bukaMesiya kuMlawuli onenyameko nonolwazelelelo ngolo hlobo?
Umfuziselo Wezinto Ezizayo
21, 22. (a) Yintoni eyayifanekiselwa yimimangaliso kaYesu? (b) Ngenxa yokuba uYesu enamandla okulawula amandla endalo, yintoni esinokuyilindela phantsi kolawulo lwakhe loBukumkani?
21 Imisebenzi yamandla uYesu awayenzayo emhlabeni yayiyimifuziselo nje kuphela yeentsikelelo ezizuke ngakumbi eziza kubakho phantsi kolawulo lwakhe njengokumkani. Kwihlabathi elitsha likaThixo, uYesu uza kuphinda enze imimangaliso—kodwa emhlabeni wonke! Khawucinge nje ngamanye amathemba achulumancisayo asengaphambili.
22 UYesu uza kwenza indalo iphela esemhlabeni ilungelelane ngokugqibeleleyo. Khumbula ukuba wabonakalisa amandla akhe okulawula amandla endalo ngokuthi azolise isaqhwithi. Ngoko ke, ngokuqinisekileyo phantsi kolawulo loBukumkani bukaKristu, akuyi kubakho mfuneko yokuba uluntu loyike ukwenzakaliswa zizaqhwithi, iinyikima, iintaba-mlilo, okanye ezinye iintlekele zemvelo. Ekubeni uYesu enguMsebénzi Onobuchule, owasetyenziswa nguYehova ukudala umhlaba nazo zonke izinto eziphilayo kuwo, ukuqonda ngokupheleleyo ukubunjwa komhlaba. Uyayazi indlela yokubusebenzisa ngokufanelekileyo ubuncwane bawo. Phantsi kolawulo lwakhe, lo mhlaba uphela uza kuguqulwa ube yiParadesi.—Luka 23:43.
23. NjengoKumkani, uYesu uza kuzanelisa njani iintswelo zoluntu?
23 Kuthekani ngeentswelo zoluntu? Ukukwazi kukaYesu ukondla amawakawaka abantu, esebenzisa kuphela intwana encinane yokudla, kuyasiqinisekisa ukuba ulawulo lwakhe luza kuyiphelisa indlala. Eneneni, ukutya okuyintabalala, nokwabiwe ngokulinganayo, kuya kuyiphelisa ngonaphakade indlala. (INdumiso 72:16) Ukoyisa kwakhe ukugula nezifo kusibonisa ukuba abantu abagulayo, abaziimfama, abayimilwelwe, nabaqhwalelayo baza kuphiliswa—ngokupheleleyo nangokusisigxina. (Isaya 33:24; 35:5, 6) Ukukwazi kwakhe ukuvusa abafileyo kuyasiqinisekisa ukuba ukomelela kwakhe njengoKumkani wasezulwini kuquka amandla okuvusa izigidi ezingenakubalwa ezisenkumbulweni kaYise.—Yohane 5:28, 29.
24. Njengoko sicingisisa ngamandla kaYesu, yintoni esifanele siyikhumbule, yaye ngoba?
24 Njengoko sicingisisa ngamandla kaYesu, masikhumbule ukuba lo Nyana uxelisa uYise ngokugqibeleleyo. (Yohane 14:9) Ngoko indlela uYesu awasebenzisa ngayo amandla isibonisa ngokucacileyo indlela uYehova awasebenzisa ngayo amandla. Ngokomzekelo, khawucinge ngendlela yothantamiso uYesu awamphilisa ngayo umntu othile owayeneqhenqa. Enovelwano, uYesu wayichukumisa le ndoda waza wathi: “Ndiyathanda.” (Marko 1:40-42) Ngeengxelo ezinjengezi, kufana ngathi uYehova uthi, ‘Yindlela leyo endiwasebenzisa ngayo amandla am!’ Ngaba oku akukushukumiseli ekubeni umdumise uThixo wethu usomandla uze umbulele ngokuwasebenzisa kwakhe ngale ndlela yothando amandla akhe?
^ isiqe. 1 Izaqhwithi zequbuliso ziqhelekile kuLwandle lwaseGalili. Ngenxa yokuba olo lwandle lusezantsi (ngeemitha ezingama-200 kunomgangatho oqhelekileyo wolwandle), apho kukho umoya oshushu ngakumbi kunakummandla olungqongileyo, yaye oku kubangela ukuphazamiseka kwemozulu. Kugaleleka imimoya emikhulu isehla ngeNtlambo yeYordan ivela kwiNtaba yeHermon, esemantla. Imozulu ezolileyo isenokudutywa ngesiquphe sisaqhwithi esinamandla.
^ isiqe. 12 Ukongezelela, maxa wambi iincwadi zeVangeli ziquka imimangaliso emininzi kwinkcazelo nje enye. Ngokomzekelo, ngesinye isihlandlo “isixeko siphela” seza kuye, waza waphilisa “abaninzi” abagulayo.—Marko 1:32-34.
^ isiqe. 19 Ukutshica kwakuyindlela okanye umqondiso wokuphilisa owawamkelekile kumaYuda nabeeNtlanga, yaye ukusetyenziswa kwamathe ekuphiliseni kuyakhankanywa kwiincwadi zoorabhi. UYesu usenokuba watshica nje ukuze abonise le ndoda ukuba yayiza kuphiliswa. Nokuba sasiyintoni na isizathu, uYesu wayengasebenzisi amathe akhe njengento yokwemvelo yokuphilisa.
Isaya 11:1-5 UYesu uwubonakalisa njani ‘umoya wamandla,’ yaye ngenxa yoko yiyiphi intembelo esinokuba nayo kulawulo lwakhe?
Marko 2:1-12 Ukuphilisa kukaYesu ngokungummangaliso kubonisa ukuba unikwe liphi igunya?
Yohane 6:25-27 Nangona uYesu wazanelisa ngokungummangaliso iintswelo zabantu zokwenyama, yayiyintoni injongo eyintloko yobulungiseleli bakhe?
Yohane 12:37-43 Kwakutheni ukuze abanye babo bayibonayo imimangaliso kaYesu bangakholwa kuye, yaye yintoni esinokuyifunda koku?
Yintoni esenza siqiniseke ukuba kungekudala uKumkani othanjisiweyo kaThixo uza kuqinisekisa ukuba ukuthanda kukaThixo kuyenziwa emhlabeni?